ဒူဒူကြီး: Proximity sensor (၁)
Proximity ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ၊ approximately ဆိုတဲ့ အနီးစပ်ဆုံးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့၊ ဝေါဟာရမှ ဆင်းသက်လာပြီး၊ မထိတထိအနီးကပ်ဆုံးအနေအထားလို့ သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း၊ ငယ်ဆရာတဦးက ပြောဖူး ပါတယ်။ proximity sensor ဆိုတာကတော့၊ object ဆိုတဲ့အရာဝထ္တုတခုကို၊ physical contact သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှုမရှိပဲ၊ အာရုံခံတဲ့ကရိယာရယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ တနည်းအားဖြစ့် non-contact detection အနေနဲ့ sense လုပ်တဲ့၊ အာရုံခံတဲ့ကရိယာတွေဟာ 'Proximity sensors' တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Limit switches
limit switches တွေဟာ၊ လှုပ်ရှားနေတဲ့ object ဆိုတဲ့အရာဝထ္တုနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးမှ၊ movement အခြေအနေတွေကို၊ electrical contact အနေနဲ့အသိပေးပါတယ်။၊ proximity switches လို့ခေါါတဲ့ proximity sensors တွေကတော့၊ လှုပ်ရှားနေတဲ့ object နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိပဲ၊ movement အခြေ အနေတွေကို၊ electrical signal အဖြစ်အသိပေးပါတယ်။
Fig. Proximity switch
proximity switches တွေကို၊ Inductive Proximity Sensor, Capacitive Proximity Sensor နဲ့ Magnetic Proximity Sensor ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ proximity switches တွေရဲ့ standardization အတွက်၊ IEC 60947-5-2 အရ၊ definition of non-contact position detection switches ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားသလို၊ JIS ဆိုတဲ့ Japanese Industrial Standards အနေနဲ့၊ JIS C 8201-5-2 (Low-voltage switch gear and control gear, Part 5: Control circuit devices and switching elements, Section 2: Proximity sensors) ဆိုပြီး၊ သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
semi-conductors တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ proximity sensors တွေဟာ၊ detect လုပ်တဲ့အခါ၊ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်း မရှိတဲ့အတွက်၊ sensor နဲ့ object မှာ abrasion သို့မဟုတ် scratches ဆိုတဲ့ ပွန်းပဲ့မှုတွေ မဖြစ်ပေါါပဲ၊ sensor ရဲ့ output ဟာ non-contact electrical output ဖြစ်ပါတယ်။ magnets ကိုသုံးထားတဲ့ proximity sensors တွေကလွဲလို့၊ အခြား proximity sensors တွေကို၊ longer service life အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
object မှာ ရေ၊ ဆီ နဲ့ အညစ်အကြေးအမှန်အမှုန်အမွှားတွေကပ်ငြိနေပေမယ့်၊ proximity sensors အများစုဟာ detect လုပ်နိုင်သလို၊ chemical resistance ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့တဲ့ applications တွေအတွက်၊ 'fluororesin' cases တွေသုံးထားတဲ့ proximity sensors တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ high-speed response ကိုရရှိနိုင်သလို (-40 ~ +200° C) အတွင်း detect လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ wide temperature range မှာ၊ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
proximity sensors တွေဟာ၊ object ရဲ့ physical changes တွေကိုသာ၊ detect လုပ်တဲ့အတွက်၊ object's surface color ကြောင့် detection ကိုမထိခိုက်ပေမယ့်၊ ambient temperatures အပါအဝင်၊ proximity sensors တွေရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ surrounding objects တွေနဲ့ အခြား sensors တွေရဲ့ သက်ရောက်မှုတို့ဟာ၊ detection စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Selection by Detection Method
proximity sensors တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ sensing object, electrical noise, power supply, current consumption, sensing distance, ambient environment, physical vibration shock နဲ့ assembly ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါါအခြေခံပြီး၊ sensor အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။ proximity sensors တွေမှာ power line နဲ့ signal line ကို၊ combined အနေနဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်၊ three-wire sensors တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်၊ installation လို့ခေါါတဲ့ wiring work မှာ၊ 2/3 သို့မဟုတ် (၃) ပုံ (၂) ပုံလောက်လျှော့သွားတာကိုတွေ့ရပြီး၊ power line ကိုသီးခြား wired အနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ လျှင်၊ insert load ကြောင့် sensor ရဲ့ internal elements တွေထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
Reference : Marine Electrical & Automation Course - (ဦးခင်မောင်ဦး၊ အချိန်ပိုင်း ကထိက၊ စက်မှုဌာန၊ ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံကျောင်း), Technical Guide - OMRON Industrial Automation, Australia, http://en.wikipedia.org/
Image credit to : http://www.usinenouvelle.com/, http://www.omron.com.au/
Posted by ကိုထွန်း at 07:41